Burmese People: May 2008
Posted by ရန်ကုန်ပြည်သူများ at 23:26 1 comments
Posted by ရန်ကုန်ပြည်သူများ at 09:160comments
ယနေ့ကျင်းပသော ရွေးကောက် ပွဲ နှစ် ပတ်လည် နေ့အခန်းအနားမစ မှီ အချိန် တွင် အဖွဲ့ဝင် လူငယ် တချို့သည် …ရုံးချုပ်ိ ရှေ့ မှနေ ၍ ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည် နေအိမ် ဖက် သို့.."ဒေါ်အောင် ဆန်း စုကြည် ချက် ချင်း လွတ်" စာတန်းပါ ဆိုင်းဘုတ်ကို ကိုင် ဆောင် ၍ ချီတက် သွားကြ ရာ နှင်း ဆီကုန်း ဘိုးဘွားရိပ် သာ အကျော် တွင် အာဏာပိုင် များမှာ ဒိုင် နာ ကား ပေါ်သို့ဖမ်းဆီး ခေါ်ဆောင် သွားကြ သည်..။လူငယ် အင် အား (15 )ယောက် ခန့်ဖြစ် သည်..။
နေ့ လည် (2း00) အချိန် တွင် နှစ်ပတ်လည် နေ့အခန်းအနားကို စတင် ခဲ့ သည်..။
Posted by ရန်ကုန်ပြည်သူများ at 03:020comments
ရန်ကုန်သား ဘာတွေ လုပ် ခဲ့ သလဲ ….?
ရန်ကုန်သားတယောက် မုန်တိုင်းကျ ပြီး နောက် တနေ့ထဲ က တခါ မှ မရောက် ဘူးတဲ့ ကော့ မှုး ကွမ်းခြံကုန်း ကို သွားရောက် ခဲ့ ပါ တယ် …..။လက် ထဲ မှာ က လဲ လမ်း စရိတ် လောက် ပဲ ပါ တယ် ..ကားခတွေ က လဲ အရင် 1000 လောက် ပဲ ရှိတဲ့လမ်း ကို ..အဲ ဒီနေ့က 5000 ထောင် ပေး ခဲ့ ရ တယ် …။ ဒလ မြို့က စအထွက် ကတည်းက မြင် ကွင်းတွေ စိတ် မသက် သာ စရာ ပါ…။ခေတ်ဆိုးခေတ် ပျက် ကြီးထဲ မှာထမင်းတလုပ် အတွက် အချိန် ပြည့်နီး ပါး..လယ်ယာလုပ် ငန်းတွေ ..တံငါ လုပ် ငန်းတွေ နဲ့ ရုန်း ကန်နေရ တဲ့နွမ်းပါတဲ့လူတန်းစားတွေ ကို မှ နာဂစ် မုန်တိုင် က မွှေနှောက် ခဲ့ တာ ပါ… ဒီလို နဲ့ လမ်းတလျောက် ငေးမော ရင် ကော့မှူးမြို့ကို ၀င်ခဲ့ ပါ ပြီ…။ကားလမ်း က လွဲ လို့ကျန် တဲ့နေရာ တွေ လယ်ကွင်းတွေ ကို ကြည့်လိုက် ရင် တကယ့်ပင်လယ် ကြီး တခု ပါ..။ အချို့နေရာတွေ ဆိုရင် အရင် က ရွာ လေးတခု ဖြစ် ခဲ့ ပေ မယ့်…အဲဒီ အချိန် မှာတော့..အမှို က် တွေ ..သစ်ပင် အကျိုး အပဲ့ တွေ နဲ့ေ၇တွေ ကြား မှ ကုန်းတန်းလေး အဖြစ် သာ မြင် ရ ပါ တော့တယ် ….။ဒီလို နဲ့ ပဲ ကော့ မှူး မြို့နဲ့ နောက် ထပ် ကိုး မိုင် ကွာဝေးတဲ့ ကွမ်း ခြံကုန်း မြို့ ကို ရောက် ခဲ့ ပါ တယ်…။နောက် ကျိကျိ ရေ တွေ နဲ့ ကားလမ်းကားလမ်းဘေး ၀ဲ ယာ မှာဆီး ကြို နေ ပါ တယ် ..။လယ် ကွင်းတွေ ထဲ မှာ တဲ့ ထိုးနေတဲ့ သူတွေ တချို့ရေစိုအ၀တ်တွေ နဲ့ ပြေး လွှားနေကြ ပါ တယ် ..။ညအမှောင် မှာရေ တွေက် လာတော့ ဆွဲ မိဆွဲ ရာ သစ် ပင် များကို ဆွဲ ရင်းရေ နဲ့ အတူ မျောပါ လာကြ သူ များဖြစ် ပါ တယ် ..။တညလုံး…လေပြင်း များ လှိုင်းလုံး များကြား မှာ ကူးခတ်ရင် အမှောင် ကမ္ဘာထဲ အသက် လုနေကြ သူတွေ ပါ…တချို့ဆိုရင် အောက် ပိုင်း မှာ အ၀တ် မပါ လို့ကိုယ် ပေါ် မှာဝတ်ထားတဲ့ စွတ်ကျယ် ၊ အင်္ကျီ..စသည် များကို အရှက် လုံယုံပတ်ထားကြပါ တယ် ...၊တချို့ကြ ပြန်တော့လဲတွေ ရာ အ၀တ်စ များ ဖြင့်မလုံ မလဲ ပတ်ထားကြပါ တယ် ..။ထိုသူတွေ အဓိက အပြေး အလွှားသွားနေကြ တဲ့နေရာတွေက တော့သူတို့နေထိုင် ခဲ့ တဲ့အိမ်ယာတွေ ကို ပါ ပဲ .။အိမ်ယာကို အဓိက မထားပဲ ကျန်ရစ် ခဲ့တဲ့ သက် ကြီး ရွယ် အို အမိ အဖ များ နဲ့ ညီကို မောင် နှမ …အရွယ်မရောက်သေး တဲ့ကလေး ငယ် များအတွက် ပူပင်စိတ်တွေ နဲ့ အပြန် လမ်း ရှာနေကြသူများပါ.။သို့သော် လဲ အရပ် လေးမျက် နှာ မျာတော့ မျက် စိတဆုံးပင် လယ် ပြင် ကြီးတွေ ပါ …။အိမ်အပြန် လမ်း ရှာ ရင် ငို တဲ့ သူ ငို..သတိလစ် တဲ့ သူ လစ် …မြင်ကွင်းတွေ က စိတ်မသက် သာ စရာ ပါ ..။ဒီမြင်ကွင်းတွေ တွေ့ရတော့ရန်ကုန်သား ရင် ထဲမှာ သူတို့ရဲ့ သောက တွေ ကူးစက် လာ ပါ တယ်…။ဒီအချိန် မှာ ကောင်းဆုံးလုပ် ရပ် ကို အလျှင် အမြန် စဉ်းစားလိုက် ပါ တယ်…။လက် ထဲ မှာ ပါ လာ တဲ့ ကင် မရာ လေး ကို သတိရ လိုက် တယ် ….ချက် ချင်း ပဲ ပုံတော် တော် များများရိုက် ယူလိုက် တယ် …။ပြီးတာ နဲ့ ချက် ချင်း ရန်ကုန်ကို အမြန် ပြန်လာ ခဲ့ တယ် .သောက် ရေဘူးက လဲကုန်နေပြီ..ထမင်း ဆိုင် ဆိုတာဝေလာဝေး…ဆာရ ကောင်းမှန်လဲ မသိတော့ ဘူး..သူတို့ အတွက် ကိုယ်လုပ်ပေးနိုင် မယ့်အရာကူညီနိုင်မယ့်အရာကို ပဲ တလမ်းလုံးစဉ်းစားလာ ခဲ့ တယ် ..၊ဒီလို နဲ့ ရန်ကုန်ပြန်ရောက် တယ် ဆိုရင် ပဲ …သူငယ်ချင်း တွေ စိတ်တူကိုယ် တူတွေ ရှာလိုက် တယ် ..။ဓါတ်ပုံတွေ ထဲကအချို့ကူးလိုက် တယ် …. ပထမဆုံး အနေ နဲ့ ရင် နှီး တဲ့မိတ် ဆွေ တွေ ကိုအရင် ပြ လိုက် တယ် ..သူတို့ဆီ က ရ သလောက် အလှုငွေ နဲ များမဆို တောင်း ခံ လိုက် တယ် …။အဲဒီအချိန် မှာ လဲ ရန် ကုန်မှာ မြို့ပျက်ကြီး လို ဖြစ် နေ တဲ့ ကာလ..။ရန်ကုန်ကလူတွေ ကတော့မြို့တွင် လှည့်လည်ပြီး အပျက် အဆီးတွေ ကို အံ သြ စွာ နဲ့ လိုက် ကြည့် နေကြ တုန်း…။ကျနော် ရိုက် လာ တဲ့ပုံတွေ ကို ပြတော့သူတို့တွေ စုတ်တသပ်သပ် နဲ့ ….။ကျနော် လဲ မြင် တွေ့ခဲ့ ရ တဲ့ မြင် ကွင်းတွေ ကို ဇါတ်စုံ ခင်းပြ ခဲ့ တယ် …။ကျနော့လုပ် ရပ် အောင် မြင် ပါ တယ်….။ရန်ကုန်သားတွေ ရဲ့ စိတ်ဓါတ်ကို သိလာ ရ တယ်…။ မိမိအိမ်အမိုးလန်တာ …မိုးယို တာ ကို အသာ ထားပြီး…။ရန်ကုန်သား နဲ့အတူ နီးစပ် ရာ နီးစပ် ကြောင်းမှာ အလှူငွေ လိုက် ကောက် တယ် …။အားကြိုး မာန်တက် ပါ ပဲ …။ဒီလို နဲ့ စိတ်တူကိုယ်တူတွေ တက်ညီ လက် ညီ လုပ် လိုက်ကြတာ နောက် တရက် မကူးခင် မှာတင် အလှူငွေ တော်တော် ရရှိလာ ပါ တယ် ..။ဆန်အိတ် (၄၀) နီးပါး ရှိတ့ဲ ငွေ လောက် ရ ပါ တယ် ..စိတ်အေးသလိုလိုတော့ရှိလာပါ တယ်…။နောက် ရက် အတွက် ကားဌားဖို့အတွက် ညတွင်း ခြင်း စီစဉ် လိုက် တယ် ….(ဆက် လက် ဖတ်ရှု့ပါ ရန်)
Posted by ရန်ကုန်ပြည်သူများ at 07:20 1 comments
ဒုက္ခသည် များကြား ကင်မရာတလုံးနှင့် မှတ်တမ်းလိုက် ယူနေရင်နဲ့ ကြုံခဲ့ ရ သည့်အဖြစ်အပျက်တခုဖြစ်ပါသည်..။ကျနော် ပုံတွင်ပါရှိသည့် ဒုက္ခသည် မိသားစုကို ကင်မရာ ဖြင့်ချိန်ကာ ရိုက်လိုက် အစဉ်အချိန် က အနီးအနားတွင်ကလေး များတဦးတလေ မှရှိမနေပါ… မှတ်မှတ်ရရ ပါ..ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်းတင်ပြီး၍ ထိုဒုက္ခသည် မိသားစု များနှင့် စကားပြော ဆိုနေချိန် တွင်လည်း မည်သည့် ကလေး ငယ်မျှ အနီးအနားသို့ရောက် မလာ ပါ…။ ကျနော် အိမ်ပြန်ရောက်၍ကွန်ပြုတာဖြင့် ပုံ ကြီးချဲ့လိုက် သော အခါတွင် မျှ ခြေထောက်တဖက် မပါသည့်ကလေးငယ်တဦး၏ ၀ိုးတ၀ါးပုံရိပ်ပေါ်ပေါက်နေပါသည်။ကျနော်ထိုပုံကိုအထပ်အခါခါ စမ်းစစ်ကြည့်ပါသည်..။သေချာပါသည်..မကျွတ်မလွတ်သေးသော..သေဆုံးသွားသည့်ကလေး ငယ် ၏ပုံဖြစ်နေပါသည်။
ယခုဓါတ်ပုံအား ကျနော် စာတန်းရေးယုံ က လွဲ လို့ပြုပြင် ပြင်ဆင်ထားခြင်း လုံးဝ မရှိပါကြောင်း ရဲရဲဝံ၀ံ အာမခံ နိုင်ပါသည်…။ကင်မရာ ရှပ်တာအနှေး ဖြင့် လဲရိုက်ထားခြင်း လဲမဟုတ်ပါ..။ကျနော်တို့အနေဖြင့်အသက်ရှင်ကျန်နေခဲ့ သူများအား ကူညီကယ်ဆယ် နေခြင်းအပြင် သေဆုံးသွားကြသူများကိုလဲ အမျှအတမ်း ပေးဝေကာကောင်းမှု့ ကုသိုလ်ပြုပေး ကြပါရန် သတိပေးလိုက်သကဲ့ သို့ဖြစ်နေပါတော့ သည်…။
( မှတ်ချက် ) …ဤပုံသည် နာဂစ်မုန်တိုင်း ဖြစ် ပြီးလေးရက် မြောက်နေ့ တွင်ကွမ်းခြံကုန်း မြို့ ပေါ်ရှိဒုက္ခသည်စခန်းတခုတွင်ရိုက်ကူးထားသော ပုံ ဖြစ်ပါသည် ။
Posted by ရန်ကုန်ပြည်သူများ at 07:292comments
Posted by ရန်ကုန်ပြည်သူများ at 07:230comments
ရှင် ကျန်ခဲ့ တဲ့သူတွေ ကျတော့ လဲ ဒီလို အသဆိုးနဲ့သေတာ က မှကောင်း ဦး မယ် ဆို ပြီးမျကိ် ရည်ကျနေလေ ရဲ့
Posted by ရန်ကုန်ပြည်သူများ at 04:260comments
ရေနစ်လို့မသေ ပဲ စား စရာ မရှိလို့ငတ်သေတော့မယ် တဲ့
Posted by ရန်ကုန်ပြည်သူများ at 04:130comments
Posted by ရန်ကုန်ပြည်သူများ at 03:550comments
(ယခုရက်ပိုင်းတွင်း သတင်းစာများ မှကျော်ဆန်း)
လူတွေဗျာ တော်တော်ရီဖို့ ကောင်းတယ်ဗျ..။ ဘယ်လောက်ပဲပညာတတ်တတ် အသိဥာဏ်မရှိရင် အလကားပဲ..။ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးတုန်းက ဆိုရင် ရဟန်းသံဃာတွေ ၊ ကျောင်းသားပြည်သူတွေ ကိုသတ်ဖို့ ဝန်မလေးတဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေလေ..သတ်မယ်ဖျက်မယ်တကဲကဲ ပဲ..သူတို့ သတ်ရင်လဲခံရမယ်ပြည်သူတွေပါ ဗျာ..စာနာဖို့ ကောင်းပါတယ်..ပြေလည်ရာပြေလည်ကြောင်းကိုမဖြေရှင်းတတ်ဘူး..တခါလာလဲပစ်ဖို့ ခတ်ဖို့ လောက်ပဲနားလည်တဲ့သူတွေ..သေနတ်ပစ်တတ်ရုံနဲ့ တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်လို့မရ ပါဘူး…။ အဲဒီအချိန်တုန်းကများဆိုရင်ကျော်ဆန်းတို့သောက်ခွက်တွေများမျက်နှာကြောကခုနစ်ခေါက်ချိုး ၊ ရှစ်ခေါက်ချိုး နဲ့ မေး ကြော ကြီးတွေကိုထောင်နေအောင်များတင်းထားလိုက်တာ ၊ခုချိန်မှာတော့ အာဏာတည်မြဲဖို့ အရေး ပြည်သူတွေ ကို မရှက်မကြောက် လိုက်လံ စည်းရုံးနေရတဲ့မျက်နှာပေးတွေ က ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးတုန်းကသတ်ဖို့ ဖျက်ဖို့ ဝန်မလေး တဲ့မျက်နှာ ထား မျိုးမဟုတ်တော့ ဘူး..။ခုမျက်နှာပေးတွေကဘယ်သူတွေနဲ့ တူသလဲဆိုရင် ဖာတန်းကမိန်းမရွှင်ေ တွရဲ
ြ့ ကာပစ်တဲ့မျက်ခွက်မျိုးတွေချည်းပဲ…။ကျက်သရေ မျက်နှာကြီး..တကယ်ကိုအော့ နှလုံးနာဖို့ ကောင်း ပါ့ ဗျာ.. ပြောရင်းနဲ့ရွံ လာတယ်..ဝေါ့ ..ထွီ….
၀ဠ်ဆိုတာလည်တတ်တဲ့သဘောကို ဗုဓ္ဓဘာသာတိုင်း လက်ခံ ပြီးသား..ယုံကြည်မှု့ တခုပါ..။ ခုချိန်မှာ ၀ဠ်လည်ကြလေပြီ..လေ..။ ထားပါတော့ဗျာ ခုချိန်မှာကျနော်တို့ ပြည်သူတွေ သူတို့စကားကိုနားမယောင်ကြဖို့ အရေးကြီး ဆုံး အချိန်ပါပဲ..ဒီကောင်တွေ ကချော့ တခါခြောက်တလှည့် နဲ့ တိုင်းပြည်ကိုမွဲပြာကြအောင်လုပ်နေတာသိကြပြီ ပဲ. . ပြောလိုက်ရင်တော့စကားကြီးစကားကျယ်နဲ့ ..လုပ်လိုက်ရင်သောက်တလွဲ ကြီးပဲ..။ဒီစစ်အာဏာရှင်တွေ အုပ်ချုပ်နေတဲ့ဘ၀တွေ ကပြည်သူအား လုံးလွတ်မြောက်ချင်ရင်..သူတု့ိစိတ်တိုင်းကျရေးဆွဲထားတဲ့ဖွဲ့ စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ ကို အားလုံးက(X)ကြက်ခြေခတ်ပြီး ၀ိုင်းဝန်းကန့် ကွက် ကြပါလို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေခင်ဗျာ….။
Posted by ရန်ကုန်ပြည်သူများ at 06:59 1 comments
Posted by ရန်ကုန်ပြည်သူများ at 00:020comments